स्वप्निल साहित्य: 'भाषिक, साँस्कृतिक साम्राज्यवाद हावी छ'
'भाषिक, साँस्कृतिक साम्राज्यवाद हावी छ'
कवि स्व.स्वप्नील स्मृतिको असली नाम सनमान चेम्जोङ हो । लिम्बुवानको पाँचथर स्याब्रुम्बाका कवि चेम्जोङको 'रंगैरंगको भीर'२०६१ र 'वाडुली र सुदुर सम्झना' २०६८ कविता कृति ल्याएका छन् । युवाकवीमा छुट्टै पहिचान बनाएका कवि चेम्जोङसँग साहित्यका विभिन्न विषयमा 'द गोर्खाज'का लागि युवराज लिम्बूले गरेको कुराकानी
नेपाली साहित्यको पछिल्लो प्रवृत्तिबारे तपाइँको दृष्टिकोण के छ ?
-नेपाली समाजको विविधता साहित्य र चलचित्र माध्यममा थोरै भए पनि प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । यसको मिहीन रुपमा उठान हुँदै जानेमा आशा गर्न सकिन्छ । सचेत लेखकहरु त्यतातिर उन्मुख हुँदै गएका छन् । पछिल्लो चरणमा आएका आख्यान र कविताहरुमा एक भूइँ तहको पाठकले आफू र आफ्नो अनुहारलाई भेट्टाउन सक्दछ । राजन मुकारुङको हेत्छाकुप्पा, युग पाठकको उर्गेनको घोडा, नारायण ढकालको प्रेतकल्प, नयनराज पाण्डेको उलार जस्ता कृतिमा सीमान्तीकृत वर्गको जीवन चित्रित छ । कवितामा बैरागी काइँला, श्रवण मुकारुङ, भूपाल राई, हाङयुक अज्ञात, उपेन्द्र सुब्बा, प्रगति राई लगायतले विगत्मा राज्यसत्ताले कुनातिर धकेलिदिएको जीवन सौन्दर्यलाई नेपाली साहित्यको केन्द्रमा ल्याइरहेको देखिन्छ । यो लहर अन्य आदिवासी जनजाति मूलका लेखकमा पनि सर्दैछ ।
विभिन्न वादहरु, आन्दोलनहरु आएका छन् । त्यसको मनोविज्ञान कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो विविधतायुक्त समाजको चरित्रमा नै ठोक्किएका छन् । लेखकहरुलाई लेख्नको लागि कुनै बन्देज नभएकोले कतिपय लेखक सीमाभन्दा बढी भड्किएको पनि देखिन्छ । प्रविधिको विकासले साहित्य विश्वव्यापी भएको छ । डायस्पोराबाट नेपाली साहित्यले आर्थिक लगायत सिर्जनात्मक क्षेत्रमा फाइदा उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक जात्रा र महोत्सवहरु बढेका छन् ।
भाषा-शैलीगत दृष्टिले सर्वाधिक पाठकमैत्री र ग्राह्य पनि अहिले लेखिएका साहित्य नै हो कि ! किनभने अमूर्त लेखनले विदावारी पाएको छ । एक्काइसौँ शताब्दिको लेखक नबुझिने भाषामा गन्थन गर्दैन । मुन्धुम फलाक्ने फेदाङ्बा र सप्ताह पुराण भजाउने पण्डितले जस्तो बुझ्न कठिन भाषामा होइन कि सहज र सरल भाषामा लेखकले पाठकसँग साक्षात्कार गरिरहेको छ ।
उत्तरआधुनिकतावादलाई नेपाली साहित्यको पछिल्लो प्रवृत्ति र उपलब्धि हो भनेर दावा पनि गरिन्छ साँचै हो ?
मैले नेपाली साहित्यको अहिलेको समग्र अवस्था बताएको हुँ । प्रवृत्ति र उपलब्धिमा आआफ्नै दावाहरु रहने भए । सामन्तवादबाट नेपाली समाज बल्ल पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । मुलुक भर्खर धर्मनिरपेक्ष भएको छ । यहाँको विविधतालाई बल्ल स्वीकार गरिएको छ । उत्तरआधुनिकतावादले भन्ने महाआख्यानको अन्त्य, लेखकको मृत्यु, विनिर्माण, अनिश्चिता के के भन्ने छ नि …।sे त्यतातिर गइरहेको छ नेपाली साहित्य र समाज म त एउटा उन्नत समाज र सभ्यताको निर्माणमा जुटिरहेको देख्छु । नेपालमा जे जे नयाँ हुन्छ त्यो सप्पैलाई कि उत्तर आधुनिकतावादको घानमा कि माओवादमा हाल्नु ठीक हुँदैन । अरुलाई पनि त केही छोडिदिनुपर्ला ।
तपाइँको लेखनलाई उत्तरआधुनिकतावादी पनि भनिन्छ हैन ?
मेरो लेखनको उद्देश्य सामाजिक रुपान्तरण हो । नेपालमा जुन बेथिती, विसंगति अन्तरविरोध छ । जुन सामाजिक न्याय दूरावस्थामा छ । म त्यसको विपक्षमा लेखिरहेको छु । उत्तरआधुनिक रोबोट होइन म एक 'नेचुरल' मानिस हुन चाहन्छु । लक्ष्य सहितको समाज परिवर्तनमा विश्वास गर्छु ।
तपाइँको नामको 'स्व.'लाई रोला बाँथको लेखकको मृत्युसँग दाँज्नु सही हो ?
उत्तरआधुनिकतावादमा मृत्यु घोषणाको श्रृंखला छ लेखकको मृत्यु, इश्वरको मृत्यु, इतिहासको अन्त्य । उत्तर आधुनिकतावादकै मृत्युको घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । मैले स्व. ख्यालख्यालमा लेखेँ । पछि थुप्रै अन्य लेखकहरुले पनि लेखे । तर उनीहरुले त ख्यालख्यालमा लेखेका होइनन् । मलाई लाग्छ 'फलो' गरे ।
मैले तर्क बनाएको छु मरेपछि कोही पनि स्वर्ग या नर्कमा पुग्दैन । यही प्रकृतिमा सामेल हुन्छ । मरेकाहरु सबैको नाम अगाडि 'स्व.' लेख्ने चलन छ । 'न.' भनेको 'नारकीय'त कसैका नामअगाडि पाइएको छैन । त्यसैले मैले चाहिँ जिउँदै स्व. लेखेको हो । पाठकहरु नझुक्किए हुन्छ म मरेको छैन आफ्नै स्वर्गमा छु । स्व. रोला बाथको लेखकको मृत्यु फरक कुरा हो । कुनै पनि पाठ लेखिसकेपछि लेखकको मृत्यु हुन्छ । अथवा त्यो पाठमा उसको नियन्त्रण गुम्छ । लेखुन्जेल लेखक मानिदिउष भग्वान नै हुन्छ तर लेखिसकेपछि लेखक पाठको हकमा अलविदा हुन्छ । पाठकै हालिमुहाली हुन्छ ।
पछिल्लो कृति 'बाडुली र सुदूर सम्झन' नारा र नश्लीय उग्रचेतनाको सुन्दर प्रस्तुति भन्छन् नि ?
यो चाहिँ तपाइँले भन्नु भएपछि थाहा भयो । त्यसो भन्न नदिउष कसरी ? 'नारा' नेपाली साहित्यको पुरानो मुद्दा हो । दार्शनिक इन्द्रबादुर राईले लेनीनको साहित्य र कम्युनिष्ट पार्टीसम्बन्धी मान्यतालाई लिएर एउटा किताब नै तयार पार्नुभएको छ । नाम बिसे्रँ मैले …माक्स्रवादिक प्रतिबद्धता..के भन्ने छ । सर्वहारा वर्गको पक्षधरतालाई वकालत गर्ने साहित्यलाई नाराको बिल्ला लगाइँदै आएको छ । साहित्यमा पक्षधरता 'हुन्छ' 'हुँदैन' भन्ने दुवै छ । मलाई लाग्छ सत्ता-राजनीतिलाई लेख्ने हो भने सबैभन्दा बढी पक्षधरता भइहाल्छ । प्रेम यौनमा त हुन्छ । मुस्लिम समुदायमा खुला समाजको वकालत गर्दा तसलिमा नसरिनलाई फतवा जारी हुन्छ । तसलिमा नसरिनले मुस्लिम महिलाको स्वतन्त्रताको कुरा उठाउनु पनि नारा नै हो । नेपालमा कृष्ण सेन इच्छुक माओवादीलाई समर्थन गरेर साहित्य लेख्दा मारिनु पर्यो । नारा बुर्जुवाहरुले लगाउने सजिलो आरोप हो । अर्कोतिर नाराभन्दा माथि उठ्न नसक्नु माक्स्रवादी साहित्यकारहरुले गरिरहने कमजोरी हो । माक्स्रवादी सौन्दर्यशास्त्रमा सारलाई महत्वपूर्ण ठानिन्छ । बुर्जुवा साहित्यमा सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल पर्ने गालामा लिपिस्टिक पाउडर दलिन्छ । म चाहिँ आफ्नो लेखनमा सटिक सन्तुलन ल्याउन खोज्छु ।
अब आयो नश्लीय उग्रचेतना यो भनेको आदिवासी जनजातिको पक्षमा लेखियो भनेको होला । मेरो विषय म आफैँ पनि हुँ । तर मैले उग्र भएर लेखेको छैन । म त्यस्तो साम्प्रदायिक पनि हैन । सबैभन्दा बढी ब्राम्हण कूलका छोरीसँग भुतुक्कै हुने मानिस हुँ ।
नश्लीय चेतनाको 'अति' रंगवादी साहित्यिक आन्दोलन हो भन्छन् साँचो हो ?
रंगवादलाई एकछिन बिसाउ । नेपाली साहित्यमा नश्लीय बोधको कुरो सृजनशील अराजकताले उठाएको हो । नश्लको कुरा हुँदा मंगोलियन, आर्यन, ककेशीयन, द्रबिड आउँछ । मिलाएर बुझ्नुपर्छ सृजनशील अराजकताले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई लेखौँ उनीहरुको सौन्दर्यशास्त्रलाई लेखौँ भनेको होला । त्यो जायज पनि छ । रंगवादले यो लेखौँ यो नलेखौँ भन्दैन । सृजनशील अराजकता एक आन्दोलन हो भने रंगवाद दुई दिनको जिन्दगी भनेजस्तो हो । जीवनजगत् मीथ्या भन्छ हिन्दूदर्शनले हामीले जीवनजगत् रंग हो भन्यौँ ।
तपाइँ मातृभाषामा पनि साहित्य सृजना गर्नुहुन्छ मातृभाषा साहित्यको अवस्था कस्तो छ ?
मेरो मातृभाषा लिम्बु हो । आफ्नो भाषामा लेख्नुको जति सन्तुष्टि दोश्रो भाषामा लेख्दा हुँदैन । अहिले मातृभाषामा साहित्य लेखन सन्तोषजनक छैन । हिजो दमन गरियो । मातृभाषामा लेख्नेहरु आज पनि चेपुवामा छन् । साँस्कृतिक भाषिक साम्राज्यवाद हावी छ । भर्खरै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा कविता गोष्ठिमा सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूले अंग्रेजीभाषा जाने धेरै ज्ञान पाउन सकिन्छ त भन्नुभयो तर उहाँलाई्र नेपालमा कतिवटा भाषा बोलिन्छ भन्ने त अङ्ग्रेजी भाषाले सिकाएको रै'नछ । यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपालमा मातृभाषाको साहित्यको अवस्था ।
नेपाली साहित्यमा व्यवसायिक लेखक हुन गार् हो छ भनिन्छ नि ?
गार्हो छ । तर व्यवसायिक लेखनको नाममा लेखक लेखनदास हुन सक्दैन । बजारमा जे जे बिक्री हुन्छ त्यै लेख्ने हो भने त सस्तामस्ता प्रेम, तुनामुनाका कुरा लेख्यो बस्यो । त्यो पनि बिक्री नै हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी हुन्न ।
सानो नेपालमा धेरै समस्याहरु छन् । अशिक्षा छ सानो बजार छ । अनुवादको समस्या छ । लेखकहरुले पाठकलाई तान्न सकेका छैनन् । 'ओहो कवि' भनेर जग्गादलालले सजिलै हेप्न सक्छ । भ्रष्ट मन्त्रीलाई लेखेर तह लाउन सक्नुपर्यो नि लेखकले, लेखक पनि कमजोर छ ।
कविता सबैभन्दा कम बिक्री हुनेमा पर्छ भनिन्छ तपाइँको पछिल्लो कृति कतिको बिक्री भयो ?
प्रकाशकले राम्रै बिक्री भइरहेको भन्नुभएको छ । किताबै पाइएन भन्नेहरु पनि छन् ।
कविता मात्र गर्ने कि अब आख्यानमा पनि जाने ?
यो प्रश्नचाहिँ तोङ्बा मात्र खाने कि रम पनि खाने भने जस्तो भयो । कविता लेखिरहेको छु आख्यानमा जाने नजाने सोच्दैछु ।
साहित्य गरेर चामलदाल जुटिरहेको छ कि के गर्नुहुन्छ ?
दालचामलको एकदम भाउ बढ्यो । साहित्य छोडेर दालचामल बेच्दा त अलिअलि कमाइन्थ्यो होला । तर साहित्य गरेर भोकै मर्यो भनेर कसैले सुन्नु नपरोस् । त्यो साहित्य विरोधी कुरो हो । साहित्य गरेर दालचामल होइन बाँच्ने इच्छा शक्ति जुटिरहेको छ । दालचामलको लागि त के के गर्नुपर्छ के के ! सप्पै नभनूँ होला !
Posted by स्वप्निल स्मृति at 4:25 AM